Auto Air Wax taaj oo kale Machine PSB2000-6000F
3. Ku dar heeso xoog leh.
4. Adeegso luqad kala duwan oo lagu shaqeeyo, oo aad ugu fudud ka shaqeynta shaqaalaha.
5. Adeegso gudbinta otomaatigga ah iyo nidaamka miisaanka.
6. Adeegso qaybo tayo wanaagsan leh.
7. Ku habboon in la sameeyo labadaba alaab cufnaanta hooseysa.
Auto Vacuum Block Wax taaj oo kale Machine PSB2000-6000Z
6. Adeegso gudbinta otomaatigga ah iyo nidaamka miisaanka.
8. Ku habboon in la sameeyo labadaba cufnaanta hoose iyo cufnaanta sare.
EPP (Balaariyay Polypropylene)
EPP (Balaariyay Polypropylene) waa nooc ka mid ah waxqabadka sare ee polymer / gaaska walxaha isku dhafan, oo leh waxqabad aad u fiican si uu u noqdo kan ugu dhow ee sii kordhaya ilaalinta deegaanka iyo qalabka dahaarka. Waxqabadka Muhiimka ah 1. Nuugista Tamarta: maxaa yeelay alaabada EPP waxay leeyihiin qaab-dhismeed buunbuunin u gaar ah, waxay ka nuugi kartaa tamarta banaanka ka timaadda si hufan, waxayna u diidi kartaa saxaafadda si aad u wanaagsan. Dib-u-warshadaynta: Alaabada EPP dabacsanaan wanaagsan ayaa loo isticmaali karaa si isdaba joog ah, oo aan si fudud loo jabin. Xogta Farsamada ...
Waxyaabaha ugu Muhiimsan 1. Qalabka qalabku wuxuu isticmaalaa birta adag ee birta ah oo isku duuban, ka dib geedi socodka xanaaqa, ka shaqeynta qashinka, si loo hubiyo in mashiinku leeyahay qaab dhismeed adag, ma helayo miridhku isla markaana wuxuu kordhiyaa nolosha mashiinka shaqadiisa. Xakamaynta shaashadda taabashada Schneider. Nidaamka wax soo saarka oo dhan ayaa si otomaatig ah u shaqeynaya. 3.Mashiinka nidaamka quudinta cadaadiska sare leh, quudinta caaryada si dhakhso ah, mashiinka ayaa rakibi kara 36 kumbiyuutarro qoryaha buuxiya 4.Mashiinka leh ...
SPY70 \_ 90 \_ 120 Sii-sii-ballaadhiyaha joogtada ah
Waxyaabaha ugu Muhiimsan 1. Quudinta, balaadhinta, sifeynta, jajabinta, u qaadista silos si otomaatig ah 2.Waxaa marka hore la kordhinayaa marka hore iyo tan labaad, markii ugu horeysay ee la buuxiyo la qaato aaladda quudinta soo noqnoqoshada, waxay dammaanad qaadaysaa xasiloonida quudinta 35g / l 4.Foostada maaddada ee gudaha iyo dibedda, qalajiyaha sariirta ee dareeraha ah oo ka sameysan bir bir ah, si loo ilaaliyo isticmaalka joogtada ah iyo waxqabadka deggan 5. Qalabka ilaalinta korantada 6.Adopt Japanese waalka yareynta
SPJ50 \_ 70 \_ 110 \_ 130 \_ 150 \_ 160 Dufcaddii otomatiga EPS Pre-ballaadhiye
Waxyaabaha ugu Muhiimsan 1.Feeding, expander, filtering, transport to silos automatic 2.Seam system oo lagu xakameynayo waalka cadaadiska yareysa iyo waalka xaglaha kursiga, si loo gaaro kuleyl sax ah 3.Feeding system waxay qaadataa nidaamka miisaanka elektarooniga ah, xakamaynta dareemayaasha heerka qalabka, si loo xakameeyo Awoodda walxaha xumbada, si loo hubiyo in xumbada kuleylka si siman 4.Use xakamaynta PLC iyo shaashadda taabashada, lagu gaaro hawlgal toos ah oo toos ah 5. Fuustooyin cunto oo ka sameysan bir bir ah. Qaybaha korantada, filtarka ar ...
Auto Mashiinka Goynta Machine PSC2000-6000C
Waxyaabaha ugu Muhiimsan 1.Mashiinka waxaa kujiray dhamaan faa iidooyinka mashiinka nooca A, oo leh qaab dhismeed adag, transformer awood balaaran, xakameynta inta jeer ee xawaaraha mootada, iwm. nidaaminta qalabka. Fiilooyin badan ayaa wada jaraya, xawaaraha iyo danabku waa la hagaajin karaa.
Waxyaabaha ugu Muhiimsan 1. Jirka mashiinku wuxuu isticmaalaa awood sare oo ah tuubada iyo birta laba jibbaaran, qaab dhismeedkeedu adag yahay, muuqaal qurxoon 2.Mashiinka wuxuu leeyahay qalab jiif ah, toosan, oo goyn kara, seddex jiho u goynaya 3.Mashiinka wuxuu korsadaa xakameynta inta jeer ee xawaaraha mootada, xawaare fara badan hagaajin karo, dhaqdhaqaaq siman iyo buuq yar 4.Mashiinka wuxuu adeegsadaa 10 KVA transformer, kala duwanaan ballaaran, xawaaraha goynta ayaa dhakhso leh
Mashiinka Mashiinka Mashiinka CNC PSC2000-4000D
Waxyaabaha ugu Muhiimsan 1.Mashiinka muftaaxa weyn ee kuxiran bir adag iyo qalab gaar ah oo kaladuwan, dhaqdhaqaaq xasiloon, si sax ah uxakamee 2.Mashiinka isticmaalka matoorka jaranjarada, hubinta dhaqdhaqaaq habsami leh, xawaare si otomaatig ah u habeeyo. Mashiinkaani wuxuu ku habboon yahay jarista sawirrada gaarka ah, xakamaynta saxnaanta ilaa 0.5 mm 3.Mashiinka isticmaalka 3 kw tarjumaha, iyada oo loo marayo jaangooyaha korantada elektarooniga ah, korantada wax soo saarka ee 0-70 v la hagaajin karo, ayaa lagu rakibi karaa 20 silig, jarjar 20 kumbuyuutar oo isku mid ah qaababka isla waqtigaas 4.Mashiinka ...